Duufaanta Gastón oo ku xoogeysaneysa Badweynta Atlantik | Saadaasha Shabakadda
Gaston, oo ka soo baxday duufaan kuleyl ah una gudubtay heerka seddex duufaan bishii Agoosto 28, 2016, oo ku dhacday qeybta labaad maalinta xigta, ayaa markale ku sii xoogaysanaysa badweynta Atlantik. Nasiib wanaag, iyo ugu yaraan illaa iyo hadda, uma xoog badna sidii 28-kii ay lahaayeen, laakiin weli waa dhacdo saadaasha hawada oo dad badan shaki gelisa. Sababta Sababtoo ah waxay ku sii dhowaanaysaa Azores.
Xarunta Duufaanta Qaranka (CNH) ee Mareykanka waxay soo warisay inay ku taal 750 mayl (1207km) bariga Bermuda iyo 1445 mayl (2325km) galbeedka Azores.
Waad arki kartaa halka laga filayo Hurricane Gaston inay noqoto (midab madow) Sebtember 3.
Duufaanta Gastón waxay ku socotaa 16km / saacaddii, dabeysha duufaanka oo gaareysa 185km / saacaddii horeba waxaa laga diiwaangeliyey dabeylo ka badan 220km / saacaddii. Waa kan ugu awoodda badan xilliyada duufaannada Atlantika, sidaas darteed waxaa jira walaac badan oo laga qabo waxa dhici kara. Laakiin… miyaan runtii ka walaacnaa? Maxay moodeladu yiraahdaan?
Runtu waa tan sabab loo walwalo, ugu yaraan hadda. Waxaa la filayaa inay u kacdo jasiiradaha Ingiriiska, haddana heerkulka badda ee duufaanku la kulmi doono marka uu Yurub ku soo dhowaado wuu ka hooseeyaa kan kulaylaha, markaa intaas ayaa lagu daray oo la filayaa Dabaysha sarajooggeeduna wuu daciifiyaa, waxay u badan tahay, haddii ay gaarto waddankeenna, waxay u muuqan doontaa qaab duufaan ah xeebaha Galicia ilaa dhamaadka usbuuca.
Duufaan ma gaari kartaa Spain?
Sida laga soo xigtay tirakoob, suurtagalnimada in tani dhacdo waa aad u hooseeya. Intaa waxaa sii dheer, sanadkii hore duufaantii Joaquín xaalad la mid ah ayaa soo martay, laakiin aakhirkii waxay kaliya ku hartay roobabkii Galicia. Si loo helo mid ka dhigtay dhulka waa inaan dib ugu laabannaa 2005, markii Vince, oo helay qaybta 1.
Marka hada waan daganaan karnaa. Laakiin waa inaan sugnaa oo aan aragnaa waxa koorsada Hurricane Gastón ay qaadaneyso dhamaadka. Waan sii wadeynaa wargelinta.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Duufaannada » Duufaanta Gastón waxay ku sii xoogaysanaysaa badweynta Atlaantik, miyey gaari doontaa Spain?